Hoonka Dawladda – Bosaso Times News
admin November 9, 2017 Hoonka Dawladda2017-11-09T14:42:05+00:00 Puntland, somali News No Comment
Waxaa magaalada Boosaaso caanka ah in la maqlo xabado isdaba joog ah xiliyada wadooyinka farasmagaalaha magaalada kuyaal ay mashquulka yihiin. Waxaa xabadaha ridda inta badan ciidan wadada maraya iyo niman madax ah oo baabuur qoryo badan saaranyihiin ku gudajira.
Marwalba waxaa caado u ah inay xabado ridaan marka ay wadada oo mashquul ah arkaan si ay u cabsi geliyaan dareewalada iyo shacabka kale ee wadada isticmaalaya iyaguna ay u gudbaan. Waa arin joogto ka ah magaalada Boosaaso ee caasimada ganacsiga Puntland.
Dhibaatooyinka ay geystaan dadkan dawlad isku sheega ah waxaa ka mid ah in ay argagax ku ridaan dadka magaalada, inay sababaan wadada inay sii xiranto oo shilal dhacaan maadaama daraawel kasta is leeyahay wadada banee yaan xabadi ku heline.
Handadaada iyo caga jugleynta nimanka askarta ah ee madaxda waardiyeeya iyo qoray ku fiiqa dadku way la yaabaan wayna ka baqaan.
Waxay wararku sheegayaan xataa gudoomiya magaalada Boosaaso ayaa xabbada wadada ku furta marka ay mashquulka tahay, gudoomiyaha gobolka iyo saraakiisha kale ayaa iyaguna qayb ka ah, wasiiro iyo ciidamada kala duwan ee amniga dalka loo igmaday weeye kuwa dadku marwalba ka cawdaan dhibtooda.
Waxaa cajiib ah in dadka Boosaaso ay la qabsadeen maqalka xabadahaan sidaa awgeedna ay u bixiyeen magaca kor ka muuqda ee Hoonka Dawladda. Dadku waxay is weydiiyaan Boosaaso oo ah magaalo qani ah miyaa la waayey Taraafic baabuurta kala haga nidaamka wadooyinkana ka shaqeeya mushahar qumana la siiyo.
Markasta oo la maqlo xabado waxaa caan ah in la dido oo dadka qaar ay fahmi waayaan waxaa dhacaya balse qof kale oo dadka ka mid ah ayaa xasuusiya oo yiraahda waa hoonkii dawladda ee dhib ma jirto, iska fadhiya in kastoo dareewalada markaa wadada maraya uusan fadhi u oolin ee ay ka taagan tahay cagtaydoy ibixi.
http://www.bosasotimes.com/hoonka-dawladda/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/11/wado2-1024x473.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/11/wado2-150x150.jpg 2017-11-09T08:57:33+00:00 adminPuntlandsomali NewsBosaso,Puntland,Wadooyinka,Xabada wadooyinka lagu furtoWaxaa magaalada Boosaaso caanka ah in la maqlo xabado isdaba joog ah xiliyada wadooyinka farasmagaalaha magaalada kuyaal ay mashquulka yihiin. Waxaa xabadaha ridda inta badan ciidan wadada maraya iyo niman madax ah oo baabuur qoryo badan saaranyihiin ku gudajira. Marwalba waxaa caado u ah inay xabado ridaan marka ay wadada...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Bosaso, Puntland, Wadooyinka, Xabada wadooyinka lagu furto
« Muranka Dekedda Boosaaso oo weli taagan
Dekedda Boosaaso oo weli muran ka taagan yahay »